Monday, May 20th, 2019 - 14:23:50
Dani Alves Oo Qaatay Lambarkii Xavi iyo qaabka loo xiranayo Lambarada Barcelona
0 Thursday August 06, 2015 - 08:58:17
Ciyaaryahanka Dani Alves ayaa kooxda Barcelona waxa ay ku abaal marisay in sanadkaan uu qaadan funaanada ay ku qoran tahay No 6 waxa uuna ka dhaxlay Xavi Hernandez oo isaga tagay kooxdiisa sanadooyin badan ka dib.
Hodon oo guuldarro Culus U huwisay CabdiCasiis Ciyaaraha Degmooyinka+Daawo Sawirro
0 Thursday August 06, 2015 - 08:34:38
Degmada Hodon ee gobolka Banaadir ayaa guuldaro culus dusha u saarisay degmada Cabdicasiis kulan katirsan tartanka kubbadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir.
Degmada Howl Wadaag oo Meel iska Saartay Yaaqshiid Ciyaaraha degmooyinka (Daawo Sawirro)
0 Wednesday August 05, 2015 - 23:57:20
Degmada Howl wadaag ee gobolka Banaadir ayaa garaacday dhigeeda Yaaqshiid kulan katirsan ciyaaraha kubbadda cagta degmooyinka 2015.
Poulo Dybala : hadaka aan Juve ugu soo biiray waa in aan ku guulaysto koobab Muhiim ah
0 Wednesday August 05, 2015 - 23:03:13
Saxiixa cusub ee Juventus Paulo Dybala ayaa sheegay in uu bartilmaameedsanayo hanashada Scudetto waxa uuna qiray in uu jeclaan lahaa la dheelida Alessandro Del Piero.
Barceelona oo ku dhaw Saxiixa Gerson
0 Wednesday August 05, 2015 - 22:27:52
Aabaha dhalay laacibka khadka dhexe ee Fluminense Gerson ayaa qiray in uu dagaal u dhexeeyo kooxaha Barcelona iyo Roma oo ku aadan saxiixa wiilkiisa.
Muxuu Wayne Roone Ka yiri Xaalada United ee Xiligan?
0 Wednesday August 05, 2015 - 22:04:13
Kabtanka Manchester United Weyne Rooney ayaa sheegay in labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay uu su'aalo iska weydiinayey in Red Devils ay la loolami karto kooxaha Chelsea iyo Man City.
Sven-Goran Eriksson Oo Jeediyay Fikirka Looga Adkaan Karo Juventus
0 Wednesday August 05, 2015 - 14:10:27
Tababaraha lagu magacaabo Sven-Goran Eriksson ayaa waxa uu cadeeyay in kooxaha kala ah Inter iyo Milan in sanadkaan ay kula dagaalami karaan kooxda Juventus ku guuleysiga horyaalka dalka Talyaaniga.
Koox Soomaaliyeed ayaa kaalinta 3aad ka gashay koobka Norway Cup.
0 Wednesday August 05, 2015 - 13:54:50
Kooxda Warya FC oo dalkeena Soomaaliya ku matalaysay tartan kubadda cagta ah oo caalami ah isla markaana ay ka soo qaybgaleen dhamaan dhalinyarada dunida oo kala matalay kooxo kumanaan ah oo dalalkooda ah ayaa waxa ay maanta ku guulaysatay kaalinta 3 aad ee tartankaasi (Norway Cup 2015).
kulamo katirsan tartanka degmooyinka oo Maanta la ciyaarayo
0 Wednesday August 05, 2015 - 12:33:26
Kulamo ka tirsan tartanka degmooyinka aya maanta lagu wadaa in ay ka dhacaan n garoonka Banaadir.
Juventus Oo Heshiis La Gaartay Ciyaaryahanka Siqueira
0 Wednesday August 05, 2015 - 11:52:05
Kooxda Atletico Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay aqbashay in qiimo dhan €9 milyan oo Euro ay kaga iibiso kooxda Juventus ciyaaryahankeda lagu magacaabo Guilherme Siqueira.
Roma Oo Dalab Rasmi Ah U Dirsatay Mid Ka Mid Ah Laacibiinta Real Madrid
0 Wednesday August 05, 2015 - 10:51:13
Kooxda Roma ayaa waxa ay si rasmi ah kaga dalbatay kooxda Real Madrid in qaab amaah ah lagu siiyo ciyaaryahan u dhashay dalka Portuguese ee dhanka bidix ee daafaca ka ciyaara Fabio Coentrao.
Daawo Sawiradda: Waaberi iyo Xamar Weyne oo barbaro ku kalatagay ciyaaraha Degmooyinka
0 Wednesday August 05, 2015 - 10:19:50
Iyadoo tartanka kubada cagta degmooyinka gobolka Banaadir uu galay maalinkii afaraad ayaa waxaa foodda isku daray Xamar Weyne iyo Waaberi.
Guardiola iyo De Jong oo kudagalaamay garoonka Alieza
0 Wednesday August 05, 2015 - 02:03:22
Tababaraha kooxda bayren Munic h Pep Guardiola iyo Laacibka qadka dhex Milan Nigel Di jong ayaa gaan ka hal uu ku dhex maray garoonka Alienza Arena.
Bale oo gool Layaab leh ka dhaliyay kooxdiisi Hore Tottenham koobka Audi Cup 2015
0 Tuesday August 04, 2015 - 23:01:04
Kooxda Real Madrid ayaa usoo guddubtay fiinaalka tartanka Audi cup kadib marki ay 2-0 ku dhdarbaaxdady kooxda tottnham.
Kaxda oo garaacday Deyniile Ciyaaraha Degmooyinka(Daawo Sawirro)
0 Tuesday August 04, 2015 - 21:38:02
Degmada Kaxad ayaa guul ka gaartay degmada Deyniile kulanka tirsan c iyaaraha kubbadda cagta degmooyinka 2015.
Daawo Sawiradda : Kaaraan iyo Wadajir oo dadweynihi ugu badnaa ay usoo daawasho tageen tartanka degmooyinka.
0 Tuesday August 04, 2015 - 14:13:07
Degmooyinka Kaaraan iyo Wadajir ayaa isaga hor yimid garoonka Banaadir kulan ka tirsan tartanka kubbadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir 2015.
Boondheere iyo Dharkeenleey oo is mari waayay tartanka Degmooyinka _+Sawirro Qurxoon
0 Tuesday August 04, 2015 - 13:25:05
Degmooyinka Boondheere iyo dharkeenleey ayaa ku kulmay garoonka Banaadir kulanki afarad ee tartanka degmooyinka gobolka Banaadir.
Lionel Messi Oo Lagu Dhaliilay Booqasho Uu Ku Tagay Dalka Gabon
0 Tuesday August 04, 2015 - 01:57:02
Laacibka kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa la kulmay eedeyn kaga timid ururka u dooda danaha dadka aduunka ee loo yaqaan Human Rights Foundation (HRF)., kadib markii uu dhawaan tagay laacibkaan dalka Gabon , isagoo halkaasi dhagax dhigay garoon la dhisayey kaasoo ka mid noqonaya martigaliyaasha koobka…
MAQAAL: Isaga Oo Arsene Wenger Bilaabanaya Xili Ciyaareedkiisii 20 Aad Ee Arsenal, Wax Badan Ka Ogaw 199 Ka Ciyaartoy Ee Uu Arsenal Ku Soo Maamulay, Imisa Ciyaartoy Ayaadse Magacyadooda Ilawday?
0 Tuesday August 04, 2015 - 01:00:47
Tababaraha waqti xaadirkan ugu ugu muddada dheer horyaalka Ingiriiska ee Arsene Wenger ayaa bilaabanaya xili ciyaareedkiisii 20 aad ee uu tababare u ahaa kooxda Arsenal.
Tartanka Iskuulada Wadajir oo Xaflad heersare lagu soo xeray
0 Monday August 03, 2015 - 23:29:34
Xaflad lagu waynayo tartankii Iskuulada Degmada Wadajir ayaa lagu qabtay xaruntadegmadaas, waxaana munaasabada xeritaankii tartanka ka soo qeyb galay Guddoomiye ku xigeyn arimaha siyaasada gobalka Banadir Maxamed Axmed Diiriye , Guddoomiyaha Degmada wadajir Axmed Cabdulle Afrax, guddoomiyaha degamada…
« Prev1 ... 728729730731732733734Next »